सूचना प्रविधि तालिमका लागि सम्झौता
विराटनगर । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङको कटहरीका शिक्षकलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धि तालिम सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सूचना प्रविधि शिक्षामा आधारित भई शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुका लागि आधारभुत कम्प्युटर ज्ञान तथा सूचना प्रविधि शिक्षा सम्बन्धि शिक्षकहरुमा क्षमता विकास तालिम सञ्चालनको सम्झौता भएको हो ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धि तालिम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामत र सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख कृष्ण पोखरेलबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार गाउँपालिकाले तालिमका लागि ९० जना सामुदायिक विद्यालय र १० जना संस्थागत विद्यालयका शिक्षक छनौट गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले यसअघि धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, इलामको सुर्योदय नगरपालिका, झापाको अर्जुनधारा र मेचीनगर नगरपालिका, मोरंगको सुन्दरहरैचा, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, सुनसरीको धरान, इनरुवा, इटहरी बराहक्षेत्र, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । पहिलो चरणको तालिम मन्त्रालयले गत असोज १५ गतेदेखि शुरु गरेको छ ।
बुधबार, २८ असोज, २०७७, साँझको ०७:१४ बजे
जर्नल चोरी गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष
विराटनगर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापकहरुले नै विदेशी प्राध्यापकहरुको अनुसन्धान लेख चोरेर आफ्नो नाममा साभार गरेको खुलेको छ । विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ आर्दश बहुमुखी क्याम्पसबाट अवकाश प्राप्त प्राध्यापक डा. पर्शुराम मिश्रसहित ७ जनाले फ्रान्सका प्राध्यापक आर्मेल ली बेलको ‘क्रिस्टल
विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय दर्जनौं स्थानीय तहद्वारा अस्वीकार
विराटनगर । वातावरणीय प्रदूषणका कारण चार दिन देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई विराटनगर महानगरपालिकालगायत देशभरका दर्जनौं स्थानीय तहले अस्वीकार गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति असहमति राख्दै स्थानीय तहहरुले सूचना जारी गर्ने
विराटनगर । वातावरणीय प्रदूषणका कारण चार दिन देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई विराटनगर महानगरपालिकाले अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति असहमति राख्दै विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिम प्रशासन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै त्यसखालको
मेरिल्याण्डका विद्यार्थीको फ्ल्यास मव
विराटनगर । विराटनगरको भृकुटी चोकमा रहेको बेलायतको व्लभरह्याम्टन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेरिल्याण्ड कलेजका विद्यार्थीले फ्ल्यास मव कार्यक्रम गरेका छन् । कलेजका चौथो सेमेस्टर पढिरहेका विद्यार्थीले विराटनगरको भाटभटेनी सुपर मार्केटमा ‘ह्यापी’ गितमार्फत ‘फ्लास मब’ डान्स प्रस्तुत गरेका थिए । कलेजमा पढिरहेका
मिस एण्ड मिस्टर विराटनगरका विजेतालाई भानु कलेजद्वारा सम्मानित
विराटनगर । विराटनगरस्थित भानु कलेजले मिस विराटनगरसहित विभिन्न प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । बुधबार कलेज परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा मिस विराटनगर–२०२० की विजेता निष्ठा बस्नेतलाई कलेजले नगदसहित सम्मान गरेको हो । स्रष्टा समाज र डिजाइन बैंक काठमाडौंको
हिमालय दर्शनमा ईन्डक्सन सेसन
विराटनगर । विराटनगरमा रहेको मेरिल्याण्ड र शिक्षादीप कलेजको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित हिमालय दर्शन कलेजमा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको लागि ईन्डक्सन शेसन शुरु भएको छ । आइतबारबाट शुरू भएको कार्यक्रममा विएचएम. विआइएम, विसिए तथा विएससि. सिएसआइटि कार्यक्रमहरूमा यस वर्ष भर्ना भएका